လူငယ် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု စင်တာ ဖွင့်လှစ်မည် - Yangon Media Group
လူငယ် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု စင်တာ ဖွင့်လှစ်မည်
လူငယ်များ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးများကို လက်တွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အဆင့်ထိ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရမည့် Yangon Innovation Center (YIC) ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်း ထောင့်ရှိ နန်းသီတာဆိပ်ကမ်းတွင် လာမည့် စက်တင်ဘာ၌ ဖွင့်လှစ်ရန်ရည်မှန်းထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်တိုင်ရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနော် ပန်းသဉ္ဇာမျိုးက ပြောသည်။
”စက်တင်ဘာလမှာ လူငယ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုစင်တာရဲ့ ပထမအဆင့်အဆောက်အအုံကို စတင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကို တင်ဒါစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ အော်ပရေတာအနေနဲ့ စင်တာမှာပါဝင် ရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကို ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပြီးပါက လူငယ်တွေကို စတင်ဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အစိုးရ အနေနဲ့လည်း တက္ကသိုလ် တွေအားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်”ဟု ဒေါ် နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးက ပြောသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်သူကို ဧပြီ ပထမပတ်ခန့်တွင် စာချုပ်နှင့်လွှဲအပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို အစိုးရအဖွဲ့နှင့်(Management Team) ဖွဲ့စည်းကာ စောင့်ကြည့်သွားမည် ဟုသိရသည်။
”ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က(YIC) ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာသံတ မန်တွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့ပွဲကို စင်တာတည်ဆောက်သွားမယ့် နန်းသီတာဆိပ်ကမ်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံတကာနည်းပညာကို မလိုက်နာပါက နိုင်ငံကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းလျော့ ကျသွားနိုင်တာကြောင့် ဖန်တီးမှု တွေကို ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာတွေ များစွာပေါ် ပေါက်လာဖို့လိုအပ်တယ်”ဟု ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦးကပြောသည်။ လူငယ်များ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို တက္ကသိုလ်အဆင့်ပြိုင်ပွဲ များမှတစ်ဆင့် အာဆီယံအဆင့် ပြိုင်ပွဲများအထိ ပါဝင်နိုင်ရန်လုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ဆောင်လိုသည့် လူငယ်များအနေနှင့်လည်း စင်တာမှတစ်ဆင့် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Yangon Innovation Center(YIC) ၏ ဒုတိယအဆင့် အဆောက်အအုံကိုမူ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် လုပ် ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အော်ပရေတာများကို ထပ်မံ ခေါ်ယူသွားမည်ဟုသိရသည်။ ဖွင့်လှစ်သွားမည့် လူငယ်တီထွင်ဆန်း သစ်မှုစင်တာမှာ နည်းပညာကျောင်းဆင်းလူငယ်များ အပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်သည့် လူငယ်များအားလုံးကို နည်း ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ၊ အနုပညာပိုင်း၊ စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်အသစ်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး အစိုးရနှင့်လူငယ်များအကြား ချိတ်ဆက်မှုများ ပိုမိုလုပ် ဆောင်နိုင်ရန်လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
မင်းသားဝီလျံနှင့် ကြင်ရာတော် ကိတ်မင်းသမီးတို့၏ ဒုတိယသမီး မူကြိုကျောင်း စတင်တက်
ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စည်းမျဉ်းလေးခုကြောင့် ယခုနှစ်အတွင်း ဘဏ်အချို့ ပျောက်ကွယ်သွားနု?
အစိုးရတိုင်း၏ အဓိကတာဝန်မှာ နိုင်ငံအကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရန်ဖြစ်၊ ယခင်အစိုးရ အတည်ပြုခဲ့သည့်
နာဇီပုံစံ အလေးပြုသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ကို ပဲလေ့စ် ဂိုးသမား ဟန်နက်ဆီ ငြင်းဆန်
ကိုလံဘီယာ ရေနံပိုက်လိုင်း ဗုံးဖောက်ခွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်စီ ချမှတ် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အထက်တရားရုံး??
တောင်ကိုရီးယား အစိုးရ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မူဝါဒကို ဆရာဝန် သုံးသောင်းခန့် ကန့်ကွက် ဆ?
အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဝန်ထမ်းအင်အား ထပ်မံ တိုးချဲ့မည်